ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
သတင်း၊ ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကုန်ပစ္စည်း ဖျော်ဖြေရေး ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း
Medicare vs. Medicaid: ခြားနားချက်များကဘာလဲ။
Medicaid နှင့် Medicare တို့သည်အစိုးရမှထောက်ပံ့သောကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်များဖြစ်သော်လည်းလူအများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤနေရာတွင် Medicare vs. Medicaid ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
CDC ၏အဆိုအရတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးသည်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်အနီးတွင်လျှော့ထားသောသို့မဟုတ်အခမဲ့တုပ်ကွေးရောဂါကုသမှုကိုရှာရန်နေရာ ၆ နေရာတွင်ရှိသည်။
ဇူလိုင်လအတွင်းက SingleCare တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးဝါးများ
SingleCare ၏အချက်အလက်များအရနှလုံးပြproblemsနာများကိုကုသသောဆေးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးမှာ Rx အများဆုံးဖြစ်သည်။ Diuretics and statins ။
Medicare အပိုင်း B နှင့် C သည်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးသည်။ အသက် ၆၅ နှစ်ရှိသူများသည်အပိုင်း A တွင်အလိုအလျောက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်၊ တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ရန်သင် B သို့မဟုတ် C တွင်စာရင်းသွင်းရမည်။
၂၀၂၀ တွင် SingleCare နှင့်အတူအများဆုံးသိမ်းဆည်းသောပြည်နယ်များကိုကြည့်ပါ
ဤပြည်နယ် ၁၀ ခုသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် SingleCare ဖြင့်သန်းပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်မှဆေးညွှန်းငွေစုပုံခြင်းကိုကြည့်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Rx တွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးစရိတ်အကောင့် (FSA) 101: သင်သိထားရန်လိုအပ်သည်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးစရိတ်အကောင့် (FSA) သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်မှီခိုသောအသုံးစရိတ်များကိုသက်သာစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်စည်းမျဉ်းအချို့နှင့်အတူလာသည်။ ဒီမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက်ငွေကြေးအကူအညီရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများ၊ အာမခံ၊ Medicare နှင့် SingleCare တို့မှအထူးလျှော့စျေးများသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုလေ့လာပါ။
PPH vs. PPH: ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
မကြာခဏဆရာဝန်နှင့်မသွားသောသူများအတွက် HDHP များသည်အသုံးဝင်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မိသားစုများနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများရှိသူများသည် PPOs ကိုပိုနှစ်သက်လေ့ရှိသည်။ ဒီမှာ HDHP နှင့် PPO နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
Coinsurance ဆိုသည်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျငွေ၏အာမခံရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးသင်၏အိတ်ဆောင်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မည်။ 'coinsurance' သည်သင့်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုလေ့လာပါ။
တစ် ဦး '' ပေးချေမှု '' ကဘာလဲ?
ပေးချေမှုကဘာလဲ? သင်ကပေးချေရန်မလိုအပ်သော 'copay' ဆိုတာဘာလဲ၊ ၎င်းသည်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်။
နှုတ်ယူခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံမစတင်မှီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သင်ပေးသောငွေပမာဏဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် 'နှုတ်ယူပြီးသား' ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာပါ။
'Out-of- ကွန်ယက်' 'ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
အာမခံသည်ကွန်ယက်ပြင်ပမှပံ့ပိုးပေးသူများကိုဖုံးလွှမ်းမည်လား HMO, PPO, EPO နှင့် POS အစီအစဉ်များအကြားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ပြင်ပမှကွဲပြားမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သာမာန်၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု (UCR) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
UCR သည်ပုံမှန်၊ ဓလေ့ထုံးစံနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ကွန်ယက်ပြင်ပကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင့်အနေဖြင့် UCR အခကြေးငွေယူနိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုပေးဆောင်ရှောင်ရှားရန်မည်သို့မည်ပုံပါပဲ။
ကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ကွန်ယက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုသာဖုံးကွယ်ထားပြီးအထူးကုဆရာ ၀ န်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာ ၀ န်များထံမှလွှဲပြောင်းမှုများလိုအပ်သည်။ HMO များသည်အဘယ်ကြောင့်ရေပန်းစားသည်ကိုလေ့လာပါ။
ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်သင်၏လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအချက် ၅ ချက်ကအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပရီမီယံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်တွင်သင်ပရီမီယံများကိုမည်သို့တွက်ချက်ပုံနှင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုလေ့လာပါ။
SingleCare စုဆောင်းမှုကိုယခုအခါ H-E-B တွင်ရနိုင်သည်
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ H-E-B ကူပွန်ကိုဆေးညွှန်းထပ်မံဖြည့်သည့်အခါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်၏အနီးရှိ H-E-B ဆေးဆိုင်ကိုသင်၏ဇစ်ကုဒ်ကိုရိုက်။ သင်၏ Rx ကို SingleCare တွင်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရှာပါ။
သင်အာမခံမရှိပါကဆေးကုသစရိတ်အတွက်အကူအညီရရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန် ၁၃၇.၁ သန်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြွေးမြီနှင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုမပေးနိုင်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုလေ့လာပါ၊
နှုတ်ယူပြီးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များသည် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။ သို့သော်လစဉ်ပရီမီယံနိမ့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုတ်ယူခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ထိုက်တန်ပါသလော။
HMO vs. EPO vs. PPO: ခြားနားချက်များကဘာလဲ။
HMO နှင့် EPO vs. PPO အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ဤကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လွှမ်းခြုံမှုများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပွင့်လင်းသောကျောင်းအပ်ရန်ပြင်ဆင်ပါ။
meloxicam 7.5 mg ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
တုပ်ကွေးသည် influenzabထက်ပိုဆိုးသည်
တုပ်ကွေးအမျိုးအစား B သည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း
သွေးတိုးရောဂါအတွက် apple cider vinegar ဘယ်လောက်လဲ